Fumana iqabane lomphefumlo ngomhla wokuzalwa | kwimizuzu emi-5!
Umthandazo wokuba akukhangele uphelelwe lithemba (Nanamhlanje)
Umthandazo wokukhathaza intloko yendoda
Umthandazo wemiphefumlo ukwenza uthando luphambane
phupha ukuba uyajola
Phupha ngenja kuMdlalo weZilwanyana
Phupha ngeentlanzi kuMdlalo weZilwanyana
Ukuphupha uthetha nomntu oswelekileyo
Bath ukutsala lowo umthandayo
21:21: Intsingiselo kwiiyure Ezilinganayo
Iiyure ezichanekileyo: Intsingiselo Ngokuhambelana ne-Numerology
kuqala » I-Numerology » Fumana i-soulmate ngomhla wokuzalwa
Fumana i-soulmate ngomhla wokuzalwa
Enye yeendlela ezilungileyo zoku Fumana i-soulmate ngomhla wokuzalwa kukusebenzisa ukubhula ngamanani.
Usenokungayazi, kodwa amanani anokusixelela ngoku kunye nekamva lethu. Umntu ngamnye unamanani ahambelanayo ngokwegama lakhe, ubuntu bakhe kunye nomhla wokuzalwa.
Ke into ekufuneka siyenze kukufumana amanani ahambelana nothando lwakho, amanani akho kwaye ujonge ngokulula ukuba ayahambelana. Ukuba kukho umdlalo ufumanisa ngokukhawuleza ukuba lo mntu umiselwe kwangaphambili ngobomi bakho!
Ngaba iqabane lomphefumlo likhona? Indlela yokuqonda enye?
Singakuxelela ngaphandle kweengxaki ukuba amaqabane omphefumlo akhona. Wonke umntu unenye kwaye ugqiba ukuyifumana kungekudala okanye kamva.
Ukuqaphela enye ungabhenela kwi-numerology yomhla wokuzalwa kunye negama. Emva koko, kufuneka nje uchonge ezinye iimpawu ukuba ikamva likunika lona.
Ke, ukuba ufuna ukufunda ukuqaphela eyakho ngokukhawuleza, kufuneka ujonge zonke ezilula kwaye zikhawuleza inyathelo ngenyathelo elingezantsi.
Inyathelo ngenyathelo: Fumanisa iqabane lakho lomphefumlo ngomhla wokuzalwa
Le nkqubo inokubonakala inzima kancinci kubantu abaninzi, kodwa inyaniso kukuba ilula kakhulu.
Nabani na uya kukwazi ukwenza ezi zinto zimangalisayo, landela nje amanyathelo esiza kukubonisa wona ngoko nangoko.
Inyathelo 1: Fumana inombolo yomphefumlo wakhe
Inyathelo lokuqala kukufumanisa ukuba leliphi inani elihambelana nothando lwakho olukhulu. Ukwenzela oko kufuneka uwazi (umhla wakhe) wokuzalwa, kodwa bekufanele ukuba ubuwulindele ngoku.
Ukwenza ukubala, kufuneka udibanise onke amanani omhla kwaye, ekugqibeleni, wongeza amanani amabini esiphumo. Isenokubonakala inzima, kodwa makhe sikubonise umzekelo.
NgoJanuwari 17 (1) 1995 = 17 + 1 + 1 + 9 + 9 + 5 =42
Dibanisa nje onke amanani. Njengoko ubona ngasentla, yayingama-42, kodwa ayililo inani lokugqibela elo. Ukugqiba ukufumana inombolo yomphefumlo walo mntu, kufuneka udibanise la manani ama-2 kunye.
Kule meko, inombolo yomphefumlo wakhe ngu-8!
Ngoku ukuba uyenzile inkqubo yomphefumlo wakho onokuthi ubekho, kufuneka uzenzele nawe. Ngoku uya kuba nenani lemiphefumlo yenu emibini.
Ungaqhubela kwinyathelo lesibini lokufumana umntu oza kutshata naye ngomhla olula wokuzalwa.
Inyathelo 2: Kwabo bangawazi umhla wabo wokuzalwa
Usenokungazi umhla, unyaka nenyanga owazalwa ngayo lowo umthandayo. Ukuba kunjalo, sinokusebenzisa elinye iqhinga ngegama laso.
Kufuneka wazi igama kunye nefani. Emva koko, kufuneka ususe zonke izikhamiso kwaye wongeze ngokwala manani alandelayo:
A=1; E=5; I=9; O=6; U-3
Khawufane ucinge ukuba igama lakhe nguAntónio José, sishiyeke noA + O + I + O + O + E, ongu-1 + 6 + 9 + 6 + 6 + 5 = 33. Ukongeza 3+3 = 6!
Kule meko, inombolo yomphefumlo wothando lwakho iya kuba yi-6, oku ngokwegama lakho lokuqala nelokugqibela.
Inyathelo lesi-3: Yazi intsingiselo yenombolo yomphefumlo wakhe
Ngoku ekubeni uyazi ukuba yintoni inombolo yomphefumlo womntu ekuthethwa ngaye, kufuneka wazi ukuba le nombolo ithetha ukuthini ngokwenene. Eli nyathelo alibalulekanga, kodwa sicebisa ukuba ulenze njengoko liya kwenza kube lula kuwe ukuba ufumane umntu othandana naye ngomhla wokuzalwa.
Umphefumlo 1: Lo mphefumlo ngomnye wabo bathanda inkululeko kunye nokuzonwabisa. Uyakuthanda ukuzama izinto ezintsha, ukudibana nabantu abohlukeneyo kunye neendawo ezingazange zibonwe ngaphambili. Ngaphandle kwamathandabuzo, ngowona mphefumlo unomdla!
Umphefumlo 2: Uthanda uxolo kunye nokuzola kwikona yakhe. Akayithandi ingxolo okanye ukunxulumana nabantu abaninzi, njengoko oku kumosha uxolo lwakhe. Unothando, unenkathalo kwaye unenkathalo ngokwenene.
Umphefumlo 3: Ixhasa abo bantu bayidinga kakhulu, kungakhathaliseki ukuba yintoni na abayidingayo. Bahlala besecaleni kwabasweleyo ngamaxesha anzima kakhulu ukunceda, ukuvuyisa nokukhuthaza aba bantu.
Umphefumlo 4: Akakuthandi ukusebenza ngamaqela kwaye akakwamkeli ubukho babantu abaninzi ebomini bakhe. Unamandla amakhulu okukhokela, ngoko uthanda ukulungelelanisa ubomi bakhe bonke ngaphandle koncedo lwangaphandle.
Umphefumlo 5: Uthanda ukuthatha imingcipheko ebomini kwaye kuyo yonke imiba yayo! Uthanda ukuzama ukufezekisa into engazange iphunyezwe kwaye ube namava oko abanye boyika ukukufumana. Ukrelekrele, ungoyiki kwaye unobuchule.
Umphefumlo 6: Lo ngowona mphefumlo ukhuselayo kuzo zonke. Usoloko exhalabile ngabo bamngqongileyo, ingakumbi abahlobo nosapho. Bahlala bekhona kwaye bahlala bekulungele ukunceda ngamaxesha anzima kakhulu.
Umphefumlo 7: Ifaka ukubaluleka okukhulu kwiinkcukacha ezincinci. Akukho mntu ukhohlisayo abantu balo mphefumlo, oku kungenxa yokuba abaphoswa nto. Bayakuthanda ukufunda, bakrelekrele kwaye banengqiqo.
Umphefumlo 8: Yilwa ngawo onke amandla onawo imihla ngemihla ukufezekisa iinjongo zakho ezinkulu. Ungoyena mphefumlo unamabhongo kwakha kwakho, uphupha ngokuba nehlabathi ezinyaweni zakhe kwaye inyani yeyokuba ugcina efumene yonke into ayifunayo!
Umphefumlo 9: Uyathanda ukuva ukuba abanye bathini. Ngumphefumlo esinokuthetha ngawo, sikhuphe kwaye sithethe ezona mfihlo zethu zinkulu. Uthembekile, unothando kwaye unobuhlobo kakhulu.
Inyathelo 4: Jonga ukuba amagugu omphefumlo ayazana!
Ngoku kuza eyona nxalenye inzima kuyo yonke le nkqubo. Ukuza kuthi ga ngoku ubone inombolo yakho yomphefumlo, umphefumlo womntu othandekayo kunye nentsingiselo yayo.
Ngeli xesha, kufuneka ube sele unombono omncinci ukuba ngaba nibukeka kakuhle kunye, ukuba bayahambelana okanye abahambelani. Into ekufuneka uyenzile kukujonga ukuba niyazana na.
Oko kuya kwenzeka kwimeko. Ukuba ngokwenyani ningabahlobo bomphefumlo niya kugqiba nidibane kwiindawo ezingaqhelekanga rhoqo.
Khawucinge nje, baya kudibana kwi-cafe, kwimarike okanye kumgca webhanki.
Oku kudibana okungaqhelekanga kwenzeka ngenxa ikamva lizama ukunidibanisa. Le yeyona ngongoma ibalulekileyo ekufuneka uyinikele ingqalelo.
Emva koko, kufuneka ulandele intliziyo yakho kwaye ubone ukuba loo mntu uyakuqaphela njengoko ubaqaphela!
Ngaba amatye anqabileyo omphefumlo ayazana ngokujonga?
Ukuba awukakwazi ukufumana iqabane lakho lomphefumlo ngomhla wokuzalwa, kuya kufuneka ubeke ingqalelo kwinkangeleko yakho.
Njengoko besesitshilo ngaphambili, ikamva liya kukukhathalela ukwenza ukuba udibane kwezona ndawo zincinci zilindelekileyo.
Emva koko jonga loo mntu kuba baya kuqaphelana kwangoko kwinkangeleko. ukuba lo mntu jonga emehlweni akho ngaphezu kwemizuzwana emi-3 ngokulandelelana kuthetha ukuba kukho into ayivayo.
Kuthetha ukuba lo mntu waziva into ethile, umtsalane othile, umnqweno othile okanye umnqweno wokuba nawe. Olu luphawu olukhulu lokuba nazana ngokujongana nje.
Umphefumlo wam usengozini, ngoku yintoni?
Ngelishwa, ubomi eluthandweni abukho lula njengoko kubonakala. Ngamanye amaxesha uthando lwethu olumiselwe kwangaphambili luzinikele komnye umntu.
Nangona ixabisa kakhulu, akunyanzelekanga ukuba uzikhathaze ngayo. Oku “Uthando” olufunyanwa ngulo mntu luyinto nje engenamsebenzi ebomini bakho.
Ukuba loo mntu ngowakho ngokwenene, ikamva liya kukunyamekela ukuhlanganisa nina nobabini. Njengoko sithetha, usenokuba uganene, kodwa kuya kuphela kwaye loo mntu uya kuhlala ecaleni kwakhe.
Ke, inokubiza, kodwa kholelwa ukuba izinto ziya kubuyela kwindawo yazo efanelekileyo.
Soulmate kubomi obudlulileyo
Ukuphelisa eli nqaku bendifuna ukuthetha malunga nemiphefumlo evela kubomi obudlulileyo. Siye safumana abanye abafundi besibuza ukuba sibachonga njani kwaye ukuba kunokwenzeka ukwazi ukuba uthando lwethu lwangoku lwalukwaliqabane lethu kubomi bangaphambili.
Ngelishwa, akunakwenzeka ukuba ufumanise.
Kufuneka nje ulandele intliziyo yakho kunye neemvakalelo zakho. Ukuba uvakalelwa kukuba lo mntu uyakuthanda kwaye uyamthanda nalo mntu, akusekho mfuneko yazimpawu.
yazi i intsingiselo yokubona elona xesha ewotshini
Njengoko usenokuba uqaphele, akusoloko kulula ukufunda ukufumana iqabane lomphefumlo wakho ngomhla wokuzalwa, kodwa akunakwenzeka.
Sincoma ngamandla ukuba ulandele amehlo akho, intuition yakho kwaye, ngaphezu kwako konke, ulandele intliziyo yakho. Abukho ubungqina obungcono kwihlabathi kunoko uziva ngaphakathi kuwe!
1 Ngaba iqabane lomphefumlo likhona? Indlela yokuqonda enye?
2 Inyathelo ngenyathelo: Fumanisa iqabane lakho lomphefumlo ngomhla wokuzalwa
2.1 Inyathelo 1: Fumana inombolo yomphefumlo wakhe
2.2 Inyathelo 2: Kwabo bangawazi umhla wabo wokuzalwa
2.3 Inyathelo lesi-3: Yazi intsingiselo yenombolo yomphefumlo wakhe
2.4 Inyathelo 4: Jonga ukuba amagugu omphefumlo ayazana!
3 Ngaba amatye anqabileyo omphefumlo ayazana ngokujonga?
4 Umphefumlo wam usengozini, ngoku yintoni?
5 Soulmate kubomi obudlulileyo
Shiya iNgxelo Khansela impendulo
Idilesi ye-imeyile ayizukupapashwa. Iindawo ezigunyazisiweyo ziphawulwe nge *
Umthandazo wokuzola umyeni-uMarko oNgcwele kunye noSaint Manso
Umthandazo wabo bazakuhlinzwa
Umthandazo weSaint Cyprian ukuze ungabonakali
Umthandazo weSaint Cyprian ukugxotha iintshaba
Hayi MysticBr uya kufumana iintsingiselo zamaphupha kwi-intanethi, imithandazo eyahlukeneyo, ukothula iibhafu kunye ne-numerology ngomhla wokuzalwa.